Dowladda Soomaaliya oo la wareegtay Xarun hubka lagu sameeyo oo ku taalla Muqdisho – Balcad.com Teyteyleey
Howlgalladan ayaa Ciidamada isku dhafka ah oo loo xilsaaray xasilinta amaanka Caasimada Soomaaliya iyo Degmada Afgooye ee Gobolka Sh.Hoose waxey ka sameeyeen Xaafado ka tirsan Degmooyinka Wadajir iyo Shangaani Can’t find your Evecare at an affordable price? You don’t need to search anymore, ‘cause you can buy it right here only for 45.56 USD! ee Gobolka Banaadir.
Hubkan iyo waxyaabaha maanka dooriya, islamarkaana ay soo qabteen Ciidamada Dowladda ayaa lagu soo bandhigay gelinkii dambe ee maanta Xaruntii hore ee Xisbiga oo u dhow Garoonka Kubadda Cagta ee Istaadiyoow Muqdisho, halkaasi oo ah fariisinta cusub ee Ciidamada howlgalka xasilinta Caasimada.
Wasiirka Warfaafinta ee Xukuumadda Soomaaliya, Eng. C/raxmaan Cumar Cismaan Yariisoow ayaa uga warbixiyay waxyaabaha howlgalladaasi ay ku soo qabteen Ciidamada Dowladda, waxuuna sheegay in Ciidamada amaanka ay la wareegeen Xarun hubka sharci darrada lagu sameeyo oo ku taalla Degmada Shangaani ee Gobolka Banaadir.
Dhinaca kale, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre oo isna goobta kula hadlay Saraakiishii hogaamineysay howlgalladaasi ayaa ka dalbaday in ay u dhimriyaan Shacabka inta ay wadaan howlgalladaasi, isagoona sheegay in xuquuqdooda ay ka heli doonaan Dowladda.
Dhawaan ayee aheyd markii Dowladda uu hogaamiyo Madaxweyne Maxamed Abdullaahi Maxamed (Farmaajo) ay shaacisay in la fulin doono howlgallo loogu magacdaray xasilinta amaanka Magaalada Muqisho iyo Degmada Afgooye ee Gobolka Sh.Hoose.
QM wafdi ka socda oo gaaray Magaalada Garowe